Prairie နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ- Illinois နှလုံးအထူးကုများနှင့် နှလုံးကျန်းမာရေးအဖွဲ့
Prairie CARE ဆုများ
Varicose Vein ဆေးခန်း
သမားတော်နှင့် APC ကိုရှာပါ။
Virtual Office လည်ပတ်မှုများကို Prairie Cardiovascular တွင် ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ – ပိုမိုသိရှိရန်
သင့်ချိန်းထားသည့်အချိန်တွင် မျက်နှာဖုံးများ လိုအပ်ပါသည်။
သင့်ချိန်းဆိုရာသို့ မျက်နှာဖုံးကို ယူဆောင်လာရန် မမေ့ပါနှင့်။
Illinois ရှိ Prairie Heart တည်နေရာအားလုံးတွင် Mask များ လိုအပ်နေသေးသည်။
သုတေသနပြုခဲ့သည်။ သက်သေပြ။ ခေါင်းဆောင်။
နံပါတ်(၁) နှလုံးရောဂါ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး။
Vein, Vein Go အဝေး
သွေးပြန်ကြောကျန်းမာရေး အကဲဖြတ်ချက်ကို ယူပါ။
အဲဒါ ငါတို့ ဒီမှာ လုပ်နေတာ။
Virtual Office လည်ပတ်မှုများကို Prairie Cardiovascular တွင် ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
COVID-19 အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း၊ Prairie Cardiovascular သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများ၏ ဘေးကင်းရေးနှင့် အဆင်ပြေစေရန်အတွက် နေ့ချင်းညချင်း နှင့် နောက်နေ့များတွင် virtual လည်ပတ်မှုများကို ကမ်းလှမ်းရန် ကျေနပ်ပါသည်။
ရက်ချိန်းယူရန် ကျေးဇူးပြု၍ ဖုန်းဆက်ပါ။
Prairie Doctor ကိုရှာပါ။
ယခု Prairie Heart Physician ကိုရှာပါ။
နေ့ချင်းပြီး နောက်နေ့ ချိန်းဆိုမှုများ ရရှိနိုင်ပါပြီ။
ဆရာဝန်ထက် ပိုလိုအပ်တဲ့အခါ နှလုံးအထူးကုဆရာဝန်လိုတဲ့အခါ Prairie Heart က အဖြေရှိပါတယ်။ ကိုလက်စထရောများခြင်းမှ သွေးတိုးခြင်းအထိ၊ သွေးပြန်ကြောများ ခုန်မြန်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းအထိ နှလုံးရောဂါကုသခြင်းအထိ၊ Prairie Heart မှ ကျွမ်းကျင်သူများသည် ကျန်းမာသောနှလုံးဆီသို့ ခရီးတစ်လျှောက်တွင် သင့်အနားတွင် ရပ်တည်ရန် အသင့်ရှိနေပါသည်။
Prairie Cardiovascular သည် အရည်အသွေးမြင့်၊ ခေတ်မီသော နှလုံးနှင့် သွေးကြောဆိုင်ရာ စောင့်ရှောက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည့် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ သမားတော်များနှင့် APC များနှင့် ရက်ချိန်းရယူရန် မလွယ်ကူပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတဆင့် ဝင်ရောက်ခွင့် မြက်ခင်းပြင် အစီအစဉ်၊ ရက်ချိန်းတစ်ခုအတွက် သင့်တောင်းဆိုချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ လေ့ကျင့်ပေးထားသော နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ သူနာပြုအဖွဲ့ထံ လုံခြုံစွာ ပေးပို့ပါသည်။ သင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏ နှလုံးနှင့် သွေးကြောဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ကုသရန် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သော သမားတော်နှင့် APC နှင့် ရက်ချိန်းယူရာတွင် ၎င်းတို့သည် သင့်အား ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့် အကူအညီများ ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဖောင်ဖြည့်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ထံသို့ လုံခြုံသောအီးမေးလ်တစ်စောင် ပေးပို့ပါမည်။ ဝင်ရောက်ခွင့် မြက်ခင်းပြင် သူနာပြုများ။ ရုံးဖွင့်ရက်2ရက်အတွင်း သင့်ထံ ဖုန်းပြန်ဝင်လာပါမည်။
၎င်းသည် အရေးပေါ်အခြေအနေဟု ယူဆပါက 911 သို့ခေါ်ဆိုပါ။
ဖောင်ဖြည့်ခြင်းဖြင့် သင်သည် Prairie Heart ထံမှ ဆက်သွယ်မှုကို လက်ခံရယူရန် သဘောတူသည်။
မွေးရက် * MM123456789101112 / DD12345678910111213141516171819202122232425262728293031 / YYYY2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923192219211920
ဦးစားပေးဆရာဝန်နှင့် APC (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်)
ရက်ချိန်းတောင်းရခြင်း အကြောင်းအရင်း *
တစ်စုံတစ်ဦးနှင့် တိုက်ရိုက်စကားပြောလိုပါက သူနာပြုဆရာမထံ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ 217-757-6120 ။
ပုံပြင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ပုံပြင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အခြားသူများနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်း ခံစားရစေရန် ကူညီပေးပါသည်။ ပုံပြင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့ထက် ကြီးမားသောအရာတစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ ဇာတ်လမ်းတွေက ကျွန်တော်တို့ကို ကုစားပေးတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ ဇာတ်လမ်းများကို ဖတ်ရှုပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ လူနာများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများကို ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် Prairie ဇာတ်လမ်းကို မျှဝေရန် လူတိုင်းကို ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
Hands Only CPR သင်တန်း
Steve Pace ကြမ်းပြင်ပေါ် လဲကျလာသောအခါ သူ့ဇနီး Carmen က 9-1-1 ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး ချက်ခြင်း ရင်ဘတ်ဖိခြင်းကို စတင်ခဲ့သည်။ သူမသည် သင့်လျော်သောနည်းပညာကို အသုံးပြုနေသည်မှာ မသေချာသော်လည်း ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများနှင့် ပထမဦးစွာ တုံ့ပြန်သူများသည် Steve ၏အသက်ကို အမြန်ကယ်တင်ခဲ့ပြီး လူနာတင်ယာဉ်ရောက်လာသည်အထိ အသက်ရှင်နေစေကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
Carmen ၏ လျင်မြန်သော တွေးခေါ်မှု ဇာတ်လမ်းကို မှုတ်သွင်းပြီး Prairie Heart Institute မှ အဖွဲ့သည် "Keeping the Pace – Hands Only CPR" လေ့ကျင့်မှုကို ရပ်ရွာလူထုထံ ပိုမိုရိုးရှင်းသော အသက်ကယ်နည်းကို ယူဆောင်လာရန် လေ့ကျင့်မှု စတင်ခဲ့ပါသည်။
Hands Only CPR ကို CPR တွင် မလေ့ကျင့်ရသေးသော ဘေးလူများအတွက် American Heart Association မှ အကြံပြုထားသည်။ ကယ်ဆယ်ရေးသမားသည် ပါးစပ်မှ ပါးစပ်မှ လေဝင်လေထွက်များကို ပေးဆောင်ရန် ဆန္ဒမရှိသည့် အခြေအနေများတွင်လည်း အကြံပြုထားသည်။
Pace ၏ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရန်၊ ပိုမိုလေ့လာရန် သို့မဟုတ် သင့်အသိုင်းအဝိုင်းရှိ Hands Only CPR စက်ရှင်တစ်ခုတောင်းဆိုရန်၊ အောက်ပါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
Extravascular Implantable Cardioverter Defibrillator (EV ICD)၊ Hypertrophic Cardiomyopathy၊
အလုပ်သစ်တွေ ရှုပ်တာက ပုံမှန်ပါပဲ။ သို့သော် အန္တရာယ်ရှိသော နှလုံးခုန်မြန်မှုကို ကုသရန် စမ်းသပ်နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ပထမဆုံး အမေရိကန်နှင့် ဒုတိယ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် တပ်ဆင်ထားသော နှလုံးခုန်နှုန်းထိန်းစက်အသစ်ဖြင့် အလုပ်အသစ်တစ်ခု စတင်ရန် စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ [ ... ]
aortic Valve အစားထိုး
ခဏလောက်အချိန်ပေးပြီး TAVR အဖွဲ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အဆင့်များစွာတွင် ထူးချွန်ခဲ့ကြသည်။ 2013 ခုနှစ် ဧပြီလတွင် စတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ ချိုမြသော ယောက္ခမ Billy V. Williams သည် မူးမေ့လဲသွားကာ နှလုံးနှင့် ပတ်သက်ကြောင်း နောက်ပိုင်းတွင် ပြောပြခဲ့သည်။ အမြောက်အမြား စမ်းသပ်ပြီးနောက် ဆုံးဖြတ်ချက်များ […]
Theresa Thompson၊ RN၊ BSN
CABG၊ နှလုံး Catheterization, ရင်ဘတ်နာကျင်မှု
4 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ 2017 ရက်နေ့ မှာ ဖေဖေ ဆုံး ရှုံး ခဲ့ တဲ့ သူ ရဲ့5နှစ် မြောက် မွေးနေ့ ကို 89 ရက် ပဲ လို တော့ ပါ တယ် ။ ငယ်ငယ်က အဖေ့ကို ရန်မဖြစ်အောင် အမြဲမြင်တယ်။ သူက ကျွန်​​တော့်​ကို ကာကွယ်​သူ ၊ ကျွန်​​တော့်​ဘဝ နည်းပြ ၊ ကျွန်​​တော့်​ရဲ့ သူရဲကောင်း ဖြစ်​ခဲ့တယ်​ !! အရွယ်ရောက်ပြီးချိန်မှာတော့ သူအနားမှာ အမြဲရှိမနေနိုင်ပေမယ့် သူဒီလိုလမ်းလျှောက်နေသမျှကာလပတ်လုံး ကျွန်တော်သိခဲ့တယ် […]
သင်နောက်ဆုံးလိုအပ်သည်မှာ ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး အချိန်ကြာမြင့်စွာ ပြန်လည်ကောင်းမွန်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ Prairie Heart တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလုပ်ပြီးမြောက်စေရုံသာမက သမားရိုးကျလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများထက် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပြန်လည်ရောက်ရှိစေသည့် ဆန်းသစ်သော၊ အသေးစားထိုးဖောက်ခွဲစိတ်မှုများကို အထူးပြုပါသည်။
ပိုမိုလေ့လာပြီး ချက်ပြုတ်နည်းများ ရယူပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ သက်တောင့်သက်သာ ခံစားရသော ခိုင်မာသော အသိုက်အဝန်းများရှိသော ဒေသတွင် နေထိုင်ရခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ပျော်ရွှင်ပါသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့တွင် အထူးဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်နိုင်သည့် နှလုံးပြဿနာရှိသည့်အခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းမှထွက်ခွာရန် ရွေးချယ်မှု သို့မဟုတ် ပိုဆိုးသည်မှာ ဂရုစိုက်မှုကို စွန့်လွှတ်ခြင်းမျိုးနှင့် ရင်ဆိုင်ရလေ့ရှိသည်။ Prairie နှလုံးအထူးကုဆရာဝန်များ မှ သင်၏ အထူးပြု စောင့်ရှောက်မှုကို ပေးသောအခါတွင် ထိုသို့ မဟုတ်ပါ။ Prairie Heart Institute မှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ခံယူချက်မှာ ဒေသအလိုက် တတ်နိုင်သမျှ စောင့်ရှောက်မှု ပေးဆောင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ မဖြစ်နိုင်လျှင် ထိုမှသာ ခရီးထွက်မည်ဟု အကြံပြုအပ်ပါသည်။
သင့်အနီးရှိ ဆရာဝန်တစ်ဦးနှင့် APC ကိုရှာပါ။
Prairie နှလုံးအထူးကုဆရာဝန်များသည် ဒေသဆိုင်ရာဆေးရုံတစ်ခုတွင် လူနာများကိုတွေ့သည့်နေရာ 40 နီးပါးအပြင် Springfield၊ O'Fallon၊ Carbondale၊ Decatur၊ Effingham နှင့် Mattoon တို့တွင် အထူးပြုအစီအစဉ်များရှိသည်။
အကယ်၍ သင်သည် နှလုံးဖောက်ပြန်ခြင်း၏ လက္ခဏာများ ခံစားရပါက၊ Dial Don't Drive ကိုနှိပ်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ 911 ကိုခေါ်ဆိုပြီး အကူအညီကိုစောင့်ဆိုင်းပါ။
ဒီနှစ်တစ်နှစ်တည်းမှာပင် အမေရိကန်နိုင်ငံသား ၁.၂ သန်းသည် နှလုံး အရေးပေါ်အခြေအနေ ခံစားနေကြရသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ဤလူနာများအနက် သုံးပုံတစ်ပုံခန့်သည် အရေးကြီးသောအကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့် ဆေးရုံမရောက်မီ သေဆုံးရလိမ့်မည်—အရေးကြီးသောဆေးကုသမှုခံယူရန် နှောင့်နှေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း ဖြစ်ပွားသည့်အခါ စမတ်ကျပါ – ​​အမြဲတမ်း ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ၊ ဘယ်တော့မှ မမောင်းပါနဲ့။
နှလုံးရောဂါဝေဒနာရှင် အများအပြားက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ကားမောင်းတာ ဒါမှမဟုတ် မိသားစုဝင်တွေက သူတို့ကို ဆေးရုံကို မောင်းခိုင်းတယ်။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်၊ ဤအပျက်အစီးစာရင်းဇယားများကို လျှော့ချရန် ကူညီရန် နည်းလမ်းတစ်ခုရှိသည်။ “အချိန်တန်ပြီ” သည် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းဝေဒနာရှင်များအတွက် အမြန်ဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ဆေးရုံများနှင့် EMS အေဂျင်စီများကို ချိတ်ဆက်ပေးသည့် Prairie Heart Institute of Illinois (PHII) ၏ Chest Pain Network မှ တီထွင်ထားသော ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နှလုံးရောဂါသတိပေးသည့် လက္ခဏာများ ပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီအတွက် 911 သို့ အမြဲခေါ်ဆိုပါ – သင့်ကိုယ်သင် မမောင်းပါနှင့်။
နှလုံးဖောက်ပြန်ခြင်း၏ လက္ခဏာများကို တွေ့ကြုံရသောအခါ၊ သင်သိမ်းဆည်းလိုက်သော စက္ကန့်တိုင်းသည် နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်သော နှလုံးထိခိုက်မှု သို့မဟုတ် ကုသနိုင်သော အခြေအနေနှင့် အသက် သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းကြား ခြားနားချက်ကို ဆိုလိုပါသည်။ 911 ကို ဦးစွာခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် အရေးပေါ် တုံ့ပြန်သူများ ရောက်ရှိလာချိန်တွင် ကုသမှုကို စတင်ပါသည်။ EMS ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် အခြားပထမဦးစွာ တုံ့ပြန်သူများ လုပ်နိုင်သည်-
PHII Chest Pain Network အတွင်းရှိ မည်သည့်ဆေးရုံသို့မဆို သင်၏ အရေးကြီးသော ဆေးဝါးများနှင့် EKG အချက်အလက်ကို ချက်ခြင်း ပေးပို့ပါ။
သင့်ရောက်ရှိမှုအတွက် ဆေးရုံနှလုံးအဖွဲ့မှ အသင့်စောင့်ဆိုင်းနေမည်ဖြစ်ကြောင်း သေချာပါစေ။
နှလုံးရောဂါ လက္ခဏာမှ ကုသခြင်းသို့ အချိန်ကို ထိရောက်စွာ မြန်ဆန်စေသည်။
သင့်လည်ပတ်မှုအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု အကြံပြုချက်များ
သင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိနေကြောင်း သေချာပါစေ။
အကယ်၍ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသမားတော်က သင့်ကို Prairie Cardiovascular သို့ ရည်ညွှန်းပါက၊ သူ/သူမသည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မည် သို့မဟုတ် သင့်မှတ်တမ်းများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးသို့ ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ ဆေးမှတ်တမ်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံရရှိရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ မဟုတ်ပါက သင့်နှလုံးအထူးကုဆရာဝန်သည် သင့်အား လုံလောက်စွာအကဲဖြတ်နိုင်မည်မဟုတ်သည့်အပြင် အဆိုပါမှတ်တမ်းများမရရှိမချင်း သင်၏ရက်ချိန်းကို အချိန်ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်ပေမည်။ သင်ကိုယ်တိုင် ရည်ညွှန်းပြီးပါက၊ သင်သည် သင်၏ဆရာဝန်ထံ ဆက်သွယ်ပြီး သင်၏စီစဉ်ထားသော လည်ပတ်မှုမတိုင်မီ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးသို့ သင့်မှတ်တမ်းများကို ပေးပို့ရန် စီစဉ်သင့်သည်။ သင်၏အတိတ်ဆေးရာဇဝင်သည် ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ကုသခြင်းတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
သင်၏ အာမခံအချက်အလက် နှင့် သင်၏ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အားလုံးကို ယူဆောင်လာပါ။
သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ရက်ချိန်းယူသောအခါ၊ သင်၏ချိန်းဆိုမှုမတိုင်မီ ကျွန်ုပ်တို့မှ စစ်ဆေးအတည်ပြုမည့် သင်၏အာမခံအချက်အလက်များကို တောင်းဆိုမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ အာမခံကတ်နှင့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို သင်၏ပထမဆုံးချိန်းဆိုမှုသို့ ယူဆောင်လာသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လူနာဘဏ္ဍာရေးဌာနသို့ ဖုန်းဆက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ္ဍာရေးမူဝါဒများအကြောင်း ပိုမိုသိရှိနိုင်ပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ရုံးသို့ရောက်သောအခါတွင် သင်၏ဆေးဝါးများအားလုံးကို မူရင်းပုံးထဲသို့ ယူဆောင်လာပါ။ အရောင်းဆိုင်မှ ဆေးဝါးများနှင့် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ အပါအဝင် သင်သောက်နေသော ဆေးဝါးတိုင်းကို သင့်ဆရာဝန်က သိပါစေ။ ဆေးဝါးတစ်မျိုးသည် အခြားဆေးတစ်မျိုးနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပြီး အချို့ကိစ္စများတွင် ပြင်းထန်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ သင့်ဆေးဝါးများအားလုံးကို စာရင်းပြုစုရန် လွယ်ကူသောပုံစံကို သင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ဒီမှာ.
ဤအချက်အလက်သည် အလွန်အရေးကြီးပြီး သင့်ရုံးသို့ရောက်ရှိချိန်တွင် လုပ်ငန်းစဉ်ကို အရှိန်မြှင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ သင့်ဖောင်များ၏ မိတ္တူများကို အောက်တွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဖောင်များကို 833-776-3635 သို့ အချိန်မတိုင်မီ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးသို့ ဖက်စ်ပို့နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဖောင်များကို ပရင့်ထုတ်၍မရပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံး 217-788-0706 သို့ခေါ်ဆိုပြီး ဖောင်များကို သင့်ထံသို့ ပေးပို့ရန် တောင်းဆိုပါ။ သင့်ချိန်းဆိုမှုမတိုင်မီ ဖောင်ဖြည့်ခြင်း/သို့မဟုတ် ဖောင်များကိုကြည့်ရှုခြင်းသည် သင့်အား အချိန်ကုန်သက်သာစေမည်ဖြစ်သည်။
သင်၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုဖြည့်စွက်ပြီး မှတ်ပုံတင်အရာရှိတွင် သင်၏လိုအပ်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့် အာမခံအချက်အလက်များပါရှိပြီး၊ သူနာပြုသည် သင့်အား သွေးပေါင်ချိန်နှင့်သွေးခုန်နှုန်းစစ်ဆေးမည့် စာမေးပွဲခန်းသို့ ပြန်ပို့ပေးမည်ဖြစ်သည်။
သူနာပြုသည် သင်သောက်နေသည့်ဆေးများသာမက ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်နိုင်ချေရှိနိုင်သည်ကိုလည်း သိရှိရန် သူနာပြုသည် သင့်ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းကိုလည်း ယူပါမည်။ မည်ကဲ့သို့သော နာမကျန်းမှု သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာများ ခံစားရနိုင်သနည်း။ နှင့် မည်သည့် ခွဲစိတ်မှု သို့မဟုတ် ဆေးရုံမှနေ၍ သင်ရှိခဲ့ကောင်း ရှိခဲ့ပေမည်။
သင့်နှလုံးကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သော မျိုးရိုးလိုက်သော အခြေအနေများ အပါအဝင် သင့်မိသားစု၏ ကျန်းမာရေးကိုလည်း သင့်အား မေးမြန်းမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် သင့်အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် ဆေးလိပ်၊ အရက် သို့မဟုတ် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှု ရှိ၊ မရှိ မေးမြန်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင်၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အဖြစ်အပျက်များနှင့် နေ့စွဲများအားလုံးကို ချရေးပြီး ၎င်းကို သင့်ထံ သင့်ထံ ယူဆောင်လာရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
သူနာပြုဆရာမ ပြီးသည်နှင့်၊ သင့်ကျန်းမာရေး ရာဇဝင်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရန် နှလုံးအထူးကု ဆရာဝန်နှင့် တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်သည်။ စာမေးပွဲပြီးနောက်၊ သူသည် ၎င်း၏တွေ့ရှိချက်များကို သင်နှင့် သင့်မိသားစုနှင့် ဆွေးနွေးပြီး နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှု သို့မဟုတ် ကုသမှုအစီအစဉ်များကို အကြံပြုမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ယခုအချိန်တွင် သင့်တွင်ရှိနိုင်သည့်မေးခွန်းများကို နှလုံးအထူးကုဆရာဝန်ထံ လွတ်လပ်စွာမေးမြန်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သမားတော်များသည် လူနာများအား အခါအားလျော်စွာ ကြည့်ရှုနိုင်ရန် နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် အထူးလေ့ကျင့်ထားသော သမားတော်လက်ထောက်များနှင့် သူနာပြုအတတ်ပညာရှင်များကို အသုံးပြုပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် သင်၏လာရောက်လည်ပတ်မှုကို သင့်ဆရာဝန်မှ ပြန်လည်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။
သင်၏နှလုံးအထူးကုဆရာဝန်ထံ သွားရောက်လည်ပတ်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးသည် နှလုံးရောဂါမှတ်တမ်းများ၊ စစ်ဆေးမှုရလဒ်များနှင့် ကုသမှုအတွက် အကြံပြုချက်အားလုံးကို သင်၏ရည်ညွှန်းဆရာဝန်ထံ ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်၊ သင်ပြန်လာရန် လိုအပ်မည့် နောက်ထပ်စစ်ဆေးမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ စီစဉ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပြဿနာများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်နှင့် နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုတစ်စုံတစ်ရာမဖြစ်မီ ကြိုတင်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် လွန်ခဲ့သော 10 နှစ်ခန့်ကပင် မရှိခဲ့သော ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ချောင်းထိပ်တွင် စစ်ဆေးမှုများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများစွာရှိသည်။
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက သင့်နှလုံးအထူးကုဆရာဝန်ထံ ဖုန်းဆက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ခေါ်ဆိုမှုပမာဏကြောင့် သင့်ခေါ်ဆိုမှုတိုင်းကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြန်လည်ရရှိရန် ကြိုးပမ်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ ညနေ 4:00 ပြီးနောက် လက်ခံရရှိသော မည်သည့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမဆို အောက်ပါနေ့တွင် ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်၏လာမည့်ခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးစရာများရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။
အချက်အလက် သို့မဟုတ် မှတ်တမ်းများ ထုတ်ပြန်ရန် တောင်းဆိုခြင်း။
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဌာနက စီမံဆောင်ရွက်သည်။ အားလုံး လူနာသတင်းအချက်အလတ်ထုတ်ပြန်ရန် တောင်းဆိုချက်။ လူနာများအား ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အချက်အလက် (ဆေးဝါးမှတ်တမ်းများ မိတ္တူများ) ရယူရာတွင် ကူညီပေးရန်အတွက် လူနာများသည် Prairie Cardiovascular Consultants များကို သေချာစွာ ဖြည့်သွင်းသင့်သည်။ အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုချက်နှင့်/သို့မဟုတ် အကာအကွယ်ပေးထားသော အချက်အလက်ဖောင်ပုံစံ။
ပြီးပြည့်စုံသော၊ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ရက်စွဲပါ ခွင့်ပြုချက်ဖောင်များအားလုံးကို အောက်ပါထံသို့ ပြန်လည်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
619 E. Mason လမ်း
သို့မဟုတ် အီးမေးလ်- HIPAA2@prairieheart.com
သို့မဟုတ် လိုက်နာမှုဌာန- 833-776-3635 သို့ တိုက်ရိုက်ဖက်စ်
အသုံးပြုခွင့်နှင့်/သို့မဟုတ် ကာကွယ်ထားသော အချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ရန် ခွင့်ပြုချက်
လုပ်ပိုင်ခွင့် ဆွေမျိုး လက်မှတ် စာရွက်
ဆေးမှတ်တမ်း တောင်းခံခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ အခကြေးငွေတွေက ဘာတွေလဲ။
PCC လုပ်တာ မဟုတ် လူနာများ၏ ဆေးမှတ်တမ်း မိတ္တူများကို တောင်းဆိုရန်အတွက် ငွေတောင်းခံလွှာ လူနာများ၊ အခြား ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အဆောက်အအုံများ၊ သမားတော်များနှင့် APCs၊ သို့မဟုတ် စစ်မှုထမ်းဟောင်းရေးရာ စီမံခန့်ခွဲရေး ဦးစီးဌာန (VAA)။
ကျွန်ုပ်၏ ဆေးမှတ်တမ်း မိတ္တူများကို မည်သို့ရယူရမည်နည်း။
ကာကွယ်ထားသော ကျန်းမာရေးအချက်အလက်များကို အသုံးပြုရန်/ထုတ်ဖော်ရန် ခွင့်ပြုချက်အား လူနာ သို့မဟုတ် လူနာကိုယ်စားလှယ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးရပါမည်။
အသုံးပြုရန်/ထုတ်ဖော်ရန် ခွင့်ပြုချက်ရယူရန် ကာကွယ်ထားသော ကျန်းမာရေးအချက်အလက်ပုံစံကို နှိပ်ပါ။ ဒီမှာ.
ကို click ပေးပါ ဒီမှာ အကာအကွယ်ပေးထားသော ကျန်းမာရေးအချက်အလက်များကို အသုံးပြုရန်/ထုတ်ဖော်ခွင့်ပြုချက်အား ဖြည့်စွက်ရန် ညွှန်ကြားချက်များအတွက်။
ဖောင်ကို ပရင့်ထုတ်၍မရပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်မှတဆင့်။
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဌာနမှ အပြီးသတ်၊ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ရက်စွဲပါ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးသည်နှင့် တောင်းဆိုထားသော အချက်အလက်များကို လက်ခံသူထံ ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။
ခွင့်ပြုချက်သည် မည်သည့်အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသနည်း။
ခွင့်ပြုချက်လက်မှတ်ထိုးသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း 60 သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါမည်။ ခွင့်ပြုချက်သည် ရက် 60 ထက်ပို၍ တရားဝင်ရန် လိုအပ်ပါက ဒုတိယစာမျက်နှာရှိ တတိယအပိုဒ်တွင် ကွဲပြားသောရက်စွဲကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ခွင့်ပြုချက်သည် တစ်နှစ်ထက် ပိုကြာသည့် မည်သည့်အချိန်ကာလအတွက်မဆို အကျုံးဝင်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ ပြီးပြည့်စုံသော ခွင့်ပြုချက်အား မည်သည့်နေရာတွင် ပေးပို့ရမည်နည်း။
ခွင့်ပြုချက်အားလုံးကို ကျေးဇူးပြု၍ ပေးပို့ပါ-
ကျွန်ုပ်၏ အပြီးသတ်ခွင့်ပြုချက်ပေးပို့ရန် ဖက်စ်နံပါတ်ကား အဘယ်နည်း။
သင်၏ခွင့်ပြုချက်အား 833-776-3635 သို့ ဖက်စ်ပို့ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ အပြီးသတ်ခွင့်ပြုချက်အား အီးမေးလ်ပို့နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ ပြီးပြည့်စုံသော ခွင့်ပြုချက်အား အီးမေးလ်သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ HIPAA2@prairieheart.com
ကွယ်လွန်သူလူနာအတွက် ဆေးမှတ်တမ်းများရယူရန် ကျွန်ုပ်ဘာလိုအပ်သနည်း။
ကွယ်လွန်သူ၏ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို စီမံအုပ်ချုပ်သူ သို့မဟုတ် ကွယ်လွန်သူ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု စီမံခန့်ခွဲသူ သို့မဟုတ် ကွယ်လွန်သူမှ ခန့်အပ်ထားသော ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးထံမှ စာဖြင့် တောင်းဆိုမှုအပေါ် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
ကွယ်လွန်သူအတွက် ကိုယ်စားလှယ်မရှိရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
စီမံအုပ်ချုပ်သူ၊ စီမံခန့်ခွဲသူ သို့မဟုတ် အေးဂျင့်တစ်ဦးမျှမရှိသဖြင့် အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်သည် ၎င်း၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများကို စာဖြင့်ရေးသားဖော်ပြခြင်းအား အထူးကန့်ကွက်ခြင်းမရှိပါက၊ ကွယ်လွန်သူ၏ကျန်းမာရေးအချက်အလက်ကို အောက်ပါပုံစံဖြင့် လက်ခံရရှိချိန်တွင် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်- လုပ်ပိုင်ခွင့် ဆွေမျိုး လက်မှတ် ဖောင်
ကျွန်ုပ်၏ ဆေးမှတ်တမ်းများကို လက်ခံရရှိရန် အချိန်မည်မျှကြာမည်နည်း။
ဆေးမှတ်တမ်းထုတ်ပြန်ရန်အတွက်၊ သင်၏မှတ်တမ်းများကို လက်ခံရရှိရန် ရက်ပေါင်း 30 အထိ ကြာနိုင်သည်။ တောင်းဆိုချက်များကို ၎င်းတို့လက်ခံရရှိသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း လာမည့်ရက်ချိန်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေများကို STAT တောင်းဆိုချက်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် နေ့ချင်းပြီး တောင်းဆိုချက်တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်၊ ပေးထားသော ဝန်ထမ်းအင်အားနှင့် အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်တောင်းဆိုမှုအခြေအနေကို စစ်ဆေးရန် လိုက်နာမှုဌာနသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏ ဆေးမှတ်တမ်း ထုတ်ဝေမှုကို မည်သူက လုပ်ဆောင်သနည်း။
လိုက်နာရေးဌာနသည် မှတ်တမ်းတောင်းဆိုမှုများအားလုံးကို လုပ်ဆောင်သည်။
ခွင့်ပြုချက်ဖောင်တွင် လက်မှတ်ထိုးပြီး ဆေးမှတ်တမ်းများကို တစ်ချိန်တည်း ကောက်ယူနိုင်ပါသလား။
ဆေးမှတ်တမ်းပြုစုခြင်း၊ ထုတ်ယူချိန်နှင့် ခွင့်ပြုချက်လက်မှတ်ထိုးရန် ကျေးဇူးပြု၍ လိုက်နာမှုဌာနသို့ ဆက်သွယ်ပါ။ လိုက်နာမှုဌာနသည် တောင်းဆိုချက်အား စီမံဆောင်ရွက်ရန် အချိန်အလုံအလောက် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး လူနာ၏ အချက်အလက်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြီးမြောက်ကြောင်း သေချာစေရန်။
လူနာမှလွဲ၍ အခြားတစ်ဦးဦးက ကျွန်ုပ်၏ ဆေးမှတ်တမ်းများကို ကောက်ယူနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူနာက သတ်မှတ်ထားတဲ့ မည်သူမဆိုထံ မှတ်တမ်းတွေကို ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆေးမှတ်တမ်းများ ကောက်ယူရာတွင် ဓာတ်ပုံ ID လိုအပ်ပါသည်။
မတူညီသောနေရာများသို့ မှတ်တမ်းများပေးပို့ရန် တူညီသောတောင်းဆိုမှုကို သုံးနိုင်ပါသလား။
နံပါတ်၊ နေရာတစ်ခုစီအတွက် သီးခြားခွင့်ပြုချက်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။
PCC သမားတစ်ဦးစီအတွက် သီးခြားခွင့်ပြုချက် လိုအပ်ပါသလား။
မဟုတ်ပါ၊ PCC တွင် အီလက်ထရွန်းနစ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတစ်ခုရှိသည်။ သင်၏ ဆေးမှတ်တမ်းများအားလုံးကို ဇယားတစ်ခုတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။
ခွင့်ပြုချက်သည် အဘယ်ကြောင့် လက်မှတ်ပါသော နေ့စွဲဖြင့် စာရေးရမည်နည်း။
ကျန်းမာရေးအချက်အလက်ကို ထုတ်ပြန်ရန် လူနာ၏ခွင့်ပြုချက်ကို အတည်ပြုရန်။
ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘလက်တွင် Prairie Heart Institute of Illinois APP ကို ​​ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ သို့မဟုတ် သင့်သတင်းလွှာအတွက် စာရင်းသွင်းပါက၊ ကျွန်ုပ်၏အချက်အလက်များကို သင်မည်ကဲ့သို့အသုံးပြုမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Prairie Heart App မှ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို မစုဆောင်းပါ။ သင်ထည့်သွင်းသောအချက်အလက်များကို သင့်ဖုန်း သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းကိရိယာတွင်သာ သိမ်းဆည်းထားပြီး Prairie နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် အီလီနွိုက်ပြည်နယ် Prairie Heart Institute မှ မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို စုဆောင်း သို့မဟုတ် သိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာကို သင်ရွေးချယ်ပါက၊ သင့်အား သတင်းလွှာပေးပို့ရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုသာ သိမ်းဆည်းထားသည်။ Prairie Cardiovascular နှင့် Prairie Heart Institute of Illinois တို့သည် သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကို ဘယ်တော့မှ ရောင်းချမည်မဟုတ်ဘဲ အချိန်မရွေးထွက်နိုင်သည်။
Prairie အက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
Prairie Heart Institute အက်ပ်သည် ချိတ်ဆက်နေရန် လွယ်ကူစေသည်။ ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် Prairie Heart ဆရာဝန်ကိုရှာပါ သို့မဟုတ် သင်နှင့်နီးစပ်သော Prairie Heart တည်နေရာသို့ လမ်းညွှန်ချက်ရယူပါ။ အက်ပ်အတွင်းတွင်၊ “MyPrairie” ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်ကတ်အပိုင်းသည် သင့်ဆရာဝန်များ၏ ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်၊ သင့်ဆေးဝါးများ၊ ဓာတ်မတည့်မှု၊ အာမခံအချက်အလက်နှင့် ဆေးဆိုင်အဆက်အသွယ်အားလုံးကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
iPhone အတွက် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိခြင်းဆိုင်ရာ အသိပေးချက်- အဂၤလိပ္
ဘာသာစကားအကူအညီ- Deitsch | Deutsch | စပိန် | français | နင် | အီတလီ | Polski | Tagalog | TiếngViệt | ရုရှား | اُردُ | العربية | हिंदी | ພາສາລາວ | 한국어 | 繁體中文
Prairie Cardiovascular သည် Illinois အလယ်ပိုင်းရှိ နေရာအများအပြားတွင် နှလုံးသွေးကြောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ကုသရေးဆိုင်ရာ သမားတော်နှင့် APC ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းသည် ကျော်ကြားသောခွဲစိတ်တိကျမှုနှင့် နှလုံးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သောအကြံဉာဏ်များနှင့်အတူ ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အကောင်းဆုံးနှလုံးအထူးကုဆရာဝန်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ သွေးတိုးခြင်း၊ ညည်းညူခြင်း၊ ရင်တုန်ခြင်း၊ ကိုလက်စထရောများခြင်းနှင့် ရောဂါများကဲ့သို့သော အဖြစ်များသော နှလုံးရောဂါလက္ခဏာအားလုံးကို စမ်းသပ်ပြီး ဆေးပညာဖြင့် ကုသပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အဓိကမြို့ကြီးများဖြစ်သည့် Decatur၊ Carbondale၊ O'Fallon နှင့် Springfield တို့အပါအဝင် နေရာများစွာရှိသည်။
© 2020 Prairie နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ - Prairie ၏ဆရာဝန်များ